ज्योतिष शास्त्रअनुसार आजको सूर्यग्रहण ४ राशिका लागि मात्र शुभ, ८ राशिकाले हेर्न नमिल्ने ! - Sagarmatha Online News Portal
ज्योतिष शास्त्रअनुसार आजको सूर्यग्रहण ४ राशिका लागि मात्र शुभ, ८ राशिकाले हेर्न नमिल्ने !
काठमाडौ । आजको दुर्लभ सूर्यग्रहण ४ राशिका लागि मात्र शुभ हुने ज्योतिष शास्त्रीहरुले दाबी गरेका छन् ।
आइतबारको खण्डग्रास सुर्यग्रहण २ नक्षत्रलाई समेटेर लाग्दैछ । मिथुन राशिमा लाग्ने भएको हुँदा यसलाई विशेष रुपमा हेरिएको छ ।
बीचको ३ घण्टा ३१ मिनेटमा हामीले बिशेष सावधानी पु¥याउनुपर्ने बताइएको छ । मृगशिरा र आरार्ध्या नक्षत्रमा हुने र मिथुन राशीमा हुने हुनाले यसले १२ राशिमा फरक फरक असर पार्नेछ ।
वृष, मिथुन, कर्कट, तुला, वृश्चिक, धनु, कुम्भ र मीन राशीमा नकरात्मक प्रभाव पर्ने भएको हुँदा ज्योतिष शास्त्रीहरुले यसपटकको सूर्य ग्रहण हेर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
बाल्मिकी क्याम्पस ज्योतिष विभागका उपप्राध्यापक नेत्र अधिकारीका अनुसार आज बिहान १०ः५३ बजेदेखि शुरु ग्रहण अपराह्न २ः२४ मा समाप्त हुनेछ । मध्याह्न १२स्४० मा मध्य हुँदा काठमाडौँबाट सूर्य करीब ८८ प्रतिशत ढाकिएको देखिने छ ।
आजको सूर्यग्रहण कंगोबाट सुरु भई सुडान, इथियोपिया, यमन, ओमान, दक्षिण पाकिस्तान, उत्तरपश्चिम भारत, भारतको देहरादुन, कुरुक्षेत्र र दक्षिणपूर्वी चीन हुँदै प्रशान्त महासागरमा गएर अन्त्य हुनेछ ।
सूर्यग्रहण खाली आँखाले हेर्न हुँदैन । सूर्य ग्रहण हेर्दा आँखाको रेटिनामा सूर्यबाट आएको प्रकाश परेमा रेटिना नष्ट हुन गई दृष्टिविहीन हुने सम्भावना हुन्छ ।
विशेष प्रकारले बनाइएको चस्मा वा वैज्ञानिकले सिफारिस गरेअनुसारको सुरक्षात्मक पद्दतिबाट मात्र ग्रहण हेर्न हुन्छ ।